ANDRY RAJOELINA : « Ho firenena mandroso indrindra aty Afrika i Madagasikara »
Tontosa ny sabotsy hariva lasa teo nanomboka tamin’ny 4 ora ny valan-dresaka nataon’ny Filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina. 19 février 2018
Teny amin’ny efitrano malalaka Arena Ivandry. Sokajin’olona maro no tonga nanatrika ity valan-dresaka nataon’ny Filohan’ny tetezamita teo aloa ity. Nitondrany fanazavana tamin’izany ny fomba fijeriny ny raharaham-pirenena ankehitriny, sy ny vina hoentiny hampandroso ny firenena.
Niresahany manokana mikasika ilay fandraisana andraikitra ho an’ny fanarenana an’i Madagasikara na ny « Initiative pour l’Emergence de Madagascar » (Iem), tamin’io fotoana io ihany koa no nitondrany ny heviny momba ny toe-draharaha iainan’ny firenena amin’izao fotoana izao.
Tonga ny fotoana. Nivoaka tamin’ny fahanginany ny Filoha Andry Rajoelina, raha niezaka nangina foana nandritra izay efa-taona nitantanan’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina ny firenena izay. Tsy niloa-bava ny tenany na dia nisy aza ireo fanenjehana mivaivay nihatra tamin’ireo mpiara-dia aminy. Toa an’i Augustin Andriamananoro, izay naiditra am-ponja noendrikendrehina ho nitari-tolona tany Soamahamanina.
Teo ihany koa ny raharaha nanenjehana ny senatera Lylison ary ny antsojay nahazo ny depiote Lanto Rakotomanga. Na dia niaina tao anatin’ny fahantrana sy ny hirifiry lalina aza ny vahoaka malagasy vokatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fidangan’ny vidim-piainana dia tsy nahitana teny ny Filohan’ny tetezamita, ny hany nahitana azy dia ny fanampiana ireo malagasy nampijalian’ny haintany tany Atsimo sy ny fiarahana tamin’ireo fianakaviana sahirana isaky ny krismasy teny Andralanitra. Tsy nampoizina anefa, nivoaka tao anatin’ny fahanginana naharitra ny tenany ary avy hatrany dia niaraka tamin’ny vahaolana tsara lamina hoentina hanavotana ny firenena. Toy ny akoho kely notsipazana fotsimbary ny vahoaka malagasy ka sady taitra no faly raha nahita ny Filohan’ny tetezamita nivoaka tao anatin’ny fahanginany tamin’ny alalan’ilay fampahafantarana ny Iem tany Parisy.
Teboka maro no niompanan’ny valan-dresaka niarahana tamin’ny filohan’ny tetezamita Andry Rajoelina afak’omaly.
Hitondrana vahaolana ho an’i Madagasikara
Nitondrany fanazavana ho an’ny vahoaka Malagasy tsy vakivolo ny mahakasika amin’ny antsipiriany ny Iem. Tafiditra tao anatin’izany ny antony sy ny tanjona napetraka tamin’ny famoronana ity farany. Nambarany fa hitondrana vahaolana hoentina hampandrosoana an’i Madagasikara ary mba ho tombon- tsoan’ny vahoaka Malagasy tsy an-kanavaka ny antony namoronany ny vinan’ny Iem. « Ny tanjona tiana hapetraka ao anatin’izany dia ny fandraisana andraikitra mba hitondrana vahaolana hampandrosoana an’i Madagasikara. Hitantsika fa tany nosoavin’Andriamanitra i Madagasikara. Manana harena maro kanefa dia mbola miaina ary miaina tanteraka ao anatin’ny fahantrana, ao anatin’ny fahantrana mangi- tsokitsoka ny vahoaka malagasy.
Ny zavatra tena mampihetsika ny hambom-po aza, rehefa nivoaka ny salan’isa navoakan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena dia i Madagasikara no firenena anisany mahantra indrindra, any amin’ny laharana fahadimy. Izay no nahatonga ahy nametraka ny fanontaniana hoe, misy vahaolana ve azo aroso satria very fanahy mbola velona tsy misy fanantenana intsony ny vahoaka Malagasy”. Io raha fintinina ny fanazavana noentin’ny filoha, Andry Rajoelina raha nanazavana fohy ny antony namoronana ny Iem ny tenany. Vahaolana arahin’asa avy hatrany no ilain’ity firenena ity fa tsy resaka fampandriana adrisa tahaka ny fanaon’ireo mpitondra ankehitriny. Ho an’ny filoha mpanorina ny Iem manokana dia nolazainy fa mihevitra hatrany ny hampandrosoana an’i Madagasikara ny tenany ary hatramin’izay dia tsy nisy fotoana tsy nieritreretany ny mahakasika ny vahoaka Malagasy sy ny ho avin’i Madagasikara. « Misy ny vahaolana, ary izay no nahatonga ahy namorona ny Initiative pour l’emergence de Madagascar ».
Hiakatra ny ara-toekarena
Niteraka tsikera maro teo anivon’ny tambajotra sosialy “facebook” ny nanaovan’ny Filohan’ny tetezamita fanazavana voalohany ny Iem tany Parisy. Maro tamin’ireo naneho ny heviny no nihevitra fa ahiana ho misy ifandraisany amin’ny Frantsay ny antony nanatanterahana an’iny famelabelaran-kevitra voalohany iny tany ivelany. Tsotra anefa ny fanazavana sy ny valin-teny noentin’ny filoha mpanorina ny Iem raha nanontanian’ny mpanao gazety ny tenany. Nambarany mazava tsara fa tsy misy afa-tsy ho an’ny tombontsoan’ ny firenena irery ihany no antony. Nitondrany fanazavana fa tsy misy hevitra ambadika akory fa noho i Parisy anisany renivohi-paritany lehibe ao Eoropa ary noho izy tena ahitana ireo mpandraharaha goavana, orinasa lehibe, manam-pahaizana maro no antony nanaovana ny fampahafantarana ity vina ity tany Parisy.
Ankoatra izay, tany ihany koa no mora ny famondronana ireo mpandray anjara rehetra. “Fanombohana ihany no natao tany Parisy ary fampahafantarana ny Iem fa ny adihevitra lehibe mikasika ny fitondrana vahaolana dia hatao eto Madagasikara ihany”, hoy ny fanazavany. Teboka maro ho an’ny fanarenana ny firenena sy tombony ho an’ny vahoaka Malagasy no mibahan-toerana ao anatin’ny votoatin’ny Iem. Isan’izany ny lafiny tsy fandriampahalemana sy ny vahaolana ho an’ny angovo azo havaozina eto Madagasikara ary ny fanatsarana ny tontolon’ny ara-toekarena indrindra ny lafiny fizahantany.
Fanamby lehibe no napetraky ny filoha Andry Rajoelina fa izay vina napetrany dia tsy maintsy hotanterahiny ary tsy maintsy ho tanteraka. “Ao anatin’ny fotoana fohy dia tsy anisan’ny firenena farany mahantra indrindra maneran-tany intsony i Madagasikara, fa ho isan’ny firenena mandroso aty Afrika”, hoy ny fanamby goavana napetrany.
Vonona hiara-hiasa amin’ny rehetra
Ankoatra ny resadresaka mahakasika ny Iem, izay tena niompanan’ilay valandresaka nataon’ny Filohan’ny tetezamita dia anisany nitondrany ny fanehoan-keviny ihany koa ny mahakasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Araka ny fantatra dia maro ireo mpanao politika niara-dia tamin’ny Filoha Andry Rajoelina fony izy teo amin’ny fitondrana nandritra ny tetezamita saingy taty aoriana maro ihany koa ireo namadika palitao sy niala taminy. Na izany aza anefa, nahitsy ny tenany raha nilaza fa tokony hatsahatra amin’ izay ny adilahy politika satria efa leo tanteraka izany ny vahoaka Malagasy. Fampandrosoana an’ity firenena ity, hoy izy no tokony himasoan’ny rehetra.
Tsy nanavahany ihany koa fa izay rehetra manana vina sy tanjona mitovy aminy amin’ny fampandrosoana ny firenena dia misokatra tanteraka ho amin’izany fiaraha-miasa izany ny tenany.“Raha ny fama dihan’ny mpanao politika ahy no horesahina dia tsy nanao politika intsony aho. Ny politika tsy natao ho an’ny olona madio fo, ny politika tsy natao ho an’ny olona milaza ny marina fa ny fanaovana politika eto Madagasikara dia azo atao ny mandainga ary azo atao ny mamitaka, ary azo atao ny mamadika. Fa izaho kosa rehefa mieritreritra ny vahoaka Malagasy, rehefa mieritreritra an’i Madagasikara dia hoy aho hoe : adidy ny mitondra vahaolana ary adidy ny manavotra ny firenena izay mbola mahatonga ahy eto anatre han’ny vahoaka Malagasy ankehitriny”, hoy ny valin-teny nomen’ny Filoha mpanorina ny Iem.
Nohamafisiny ombieny ombieny fa tsy tokony hibahan-toerana intsony ny fifandrafiana ara-politika fa izay hanavotana ny firenena no hatao. “Ny Iem dia tsy mialon-jafy ka ny olona rehetra izay afaka mitondra ny fahaiza-manaony, afaka mifandinika, afaka miara-mitafa, afaka mijery ny fahaiza-manaon’ny tsirairay avy mikasika ny fanavotana ny firenena. Kanefa ny fiaraha-mijery vahaolana dia tsy midika akory hoe hitambatra ho antoko iray. Mba ho tombontsoan’ny firenena, na iza na iza na inona antoko misy azy na inona finoana misy azy dia vonona aho ny handray azy ireo”, io no fanazavana nomeny manoloana ny resaka mandeha ankehitriny fa hisy ny fiaraha-miasa eo amin’ny tenany sy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc.
Hampanjaka hatrany ny Demokrasia
Nandritra ny naha Filohan’ny tetezamita ny filoha mpanorina ny Iem, Andry Rajoelina dia efa nametraka hatrany ny tany tan-dalàna sy ny demokrasia ny tenany. Ny sabotsy hariva lasa teo, nandritra ilay tafatafa nifanaovana taminy no nanaovany fampitahana fa tamin’izany fotoana dia nalalaka ny fanehoan-kevitra teto Madagasikara. Porofon’izany ny famelany lalandava an’ireny hetsika tao amin’ny Magro ireny. Ankehitriny, hoy izy efa tsy hita taratra intsony izay fahafahana maneho hevitra izay. Anisany fanamby goavana apetrany ihany koa ny hampanjaka izay demokrasia izay eto Madagasikara sy ny hanafoanana ny gaboraraka rehetra. Anisany ohatra velona noraisiny tamin’izany ny fanampiana izay Ben’ny tanàna hitantana an’Antananarivo na mitovy firehana aminy na tsia.
Ho an’ny Filoha Andry Rajoelina manokana dia ny tombontsoan’ny firenena sy ny tombontsoan’ny vahoaka Malagasy iray manontolo no hokatsahiny. Teny am-pamaranana dia antso avo miharo hafatra ho an’ny rehetra no nataony, indrindra fa ho an’ireo mpanao politika dia ny tokony hampitsaharana ny fifandranitana ara-politika, ny ady seza sy ny fijerena tombontsoa ho an’ny tena manokana. “Ny fankahalana, avelao ho any, ny fifanenjehana avelao any satria mendrika ny fampandrosoana i Madagasikara”, hoy ny hafatra avy amin’ny Filoha Andry Rajoelina.
Nangonin’i Avotra Isaorana
Nahazo fandrahonana ny orinasa mpanamboatra lalana any Ambilobe MARARY FO NY HVM (545) 15 mars 2018 Noroahina hivoaka ny lapa ny mpanao gazety, raikitra ny ady saritaka FANDINIHANA LALAM-PIFIDIANANA TENY TSIMBAZAZA (358) 14 mars 2018 Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso ny Holafitra FANAMBANIANA MPANAO GAZETY (341) 15 mars 2018 “Hampidinina ho amin’ny antsasany ny vidin-jiro” ANDRY RAJOELINA SY NY IEM (279) 13 mars 2018 Ramatoa iray maty, tovovavy efatra lasa natao takalon’aina FANAFIHAN-DAHALO TAO MAHABO (249) 15 mars 2018 Nolanian’ny malaso tamin’ny lehiben’ny andrimasom-pokonolona ny bala VALY FATY (244) 13 mars 2018